Kubatana Kushambadzira neGoogle Spreadsheets | Martech Zone
Kubatana Kushambadzira neGoogle Spreadsheets
Muvhuro, July 10, 2006 Chipiri, July 4, 2017 Douglas Karr
Ndabvunzana neChamber of Commerce yemuno manheru ano kuti tikurukure kuvandudzwa kweMitezo. Iyo Chamber isangano rinonakidza, asi iri muenzaniso wakanaka webasa uko kumutsiridzwa kuri kurova kwemoyo kwesangano. Ndine chokwadi chekuti Chamber pamwe inorasikirwa nemari kune vanhu vanojoinha mugore rekutanga. Nekudaro, mushure megore iro, purofiti yavo inowedzera - uye kukosha kweiyo Chamber Nhengo hakutombodzikira.
Manheru ano ndataura nemumwe wandinoshanda naye, Darrin Grey, pamabatiro atingaite nyore nyore saiti yekubatana uko nhengo dzinobatsira nekuvandudzwa dzinogona kuteedzera kusangana kwavo nenhengo nyowani kana nhengo dzinogona kunge dziri panjodzi. Takataura kuburikidza nekugadzira webhusaiti - chimwe chinhu chingangoda zviuru zvishoma zvemadhora uye nemavhiki mashoma kuti upedze. Darrin akasundira mhinduro iri nani uye akazopedzisira azoti ... "Ndinoshuva dai taigona kungokanda pepa rekuzvara kumusoro kumwe uko vanhu vangangovandudza ruzivo rwavo."
Voila! Google Spreadheets. Shamwari yangu, Dale, akagovana neni sahwira masvondo mashoma apfuura uye ini ndakamurangarira achindiudza kuti ndione. Zvakatora kusvika manheru ano, asi ini ndakazviita uye zvakanaka. Mushure mekunge uchengetedze spreadsheet yako, une mukana wekukoka vanhu kuti vagadzirise kana kuona iyo spreadsheet.
Ini ndawedzera zano reGoogle rekudzora vhezheni (kuturika iyo nitwit iyo inobvisa mitsara yese netsaona), pamwe nemvumo yeSheet-chikamu. Mune ino kesi, isu tinogona kuvaka pepa kune yega yega nhengo inobatsira kuteedzera avo vakagoverwa mungozi vari panjodzi.
Chishandiso chakakura zvakadaro! Ndinofunga zvichashanda. Darrin neni tanga tichiri kubatsira Chamber kuongorora mabhizinesi avo kune kumwe kufungidzira kwekutarisira kuongororwa makore maviri apfuura. Gore rakapera, ini ndakagadzira muridzi weZ-Score yakavakirwa paSIC, Makore muBhizinesi, Nhamba yeVashandi, uye Yakazara Yekutengesa Vhoriyamu. Izvi zvakatibvumidza kuongorora uye kudhonza 1 / 10th tarisiro yezvikwata zvavo zvekutengesa kuti vataure. Mhedzisiro yekuratidzira yanga iri pamusoro pevhareji, asi isu tiri kugadzirisa modhi yekuvandudza mhedzisiro gore rino.
Tags: brandirectchamberchamber of commercedarrin kuchenaGoogle SpreadsheetsKufungidziratelemarketing
Unmanned Kushambadzira Drones
Mashup Camp ino svondo rino muMountain View, CA